N'ogbe Otu ntụpụ ụkwụ HCV Ule (Dum Ọbara / ọbara / Plasma), HCV Rapid Test Ngwaọrụ na-emepụta na ndị na-eweta ya | HEO
Usoro izugbe nke ịchọpụta ọrịa na HCV bụ ịdebe ọnụnọ nke nje na nje virus site na usoro EIA yana nkwenye na Western Blot. Nnwale HCV Otu Nzọụkwụ bụ nnwale dị mfe, nke na-ahụ ihe na-alụso ọrịa ọgụ n’ime ọbara dum / ọbara / plasma. Ule a dabere na immunochromatography ma nwee ike ịpụta nsonaazụ n'ime nkeji iri na ise.
The One Nzọụkwụ HCV Ule a Colloidal Gold enwekwukwa, ngwa ngwa Immunochromatoraphic nnwale maka qualitative nchọpụta nke-alụso ọrịa ọgụ Hepatitis C Virus (HCV) na Human Dum Blood / ọbara / Plasma. Ule a bu ule nyocha na aghaghi ikwenye site na iji ule ozo dika Western Blot. Emere ule a maka naanị ndị ọkachamara ahụike. Ebumnuche a na nsonaazụ nke nnwale ahụ bụ maka ndị ọrụ ahụike na ndị ọka iwu naanị, belụsọ ma e nyere ikike site na iwu na obodo eji. E kwesịghị iji ule ahụ mee ihe n’enweghị nlekọta kwesịrị ekwesị.
PRkpụrụ nke usoro
Ihe nyocha a na-amalite site na ntinye nke etinyere na nke ọma na mgbakwunye nke inye diluent ozugbo. HCV antigen-Colloidal Gold conjugate agbakwunyere na mpempe akwụkwọ nlele ahụ na-emetụta HCV antibody dị na ọbara ma ọ bụ plasma, na-akpụ conjugate / HCV antibody complex. Dika emere ka agwakota ihe ndi ahu pugharia na ihe nlere, ihe conjugate / HCV antibody bu ihe ejidere site na protein na-ejide ihe mgbochi A na-ebugharị na akpụkpọ ahụ nke na-eme otu agba na mpaghara ule. Ihe nlele na-ezighi ezi anaghị emepụta akara ule n'ihi enweghị Colloidal Gold conjugate / HCV antibody complex. Antigens ndị e ji mee ihe n’ule ahụ bụ protein na-enye recombinant kwekọrọ n’ógbè HCV nke na-anaghị arụ ọrụ nke ọma. Njikwa akara agba na mpaghara nchịkwa na-egosi na njedebe nke usoro ule ahụ n'agbanyeghị nsonaazụ ule ahụ. Njikwa akara a bụ nsonaazụ nke Colloidal Gold conjugate nke ejikọtara mgbochi HCV na-egbochi ya na akpụkpọ ahụ. Usoro akara na-egosi na conjugate Colloidal Gold na-arụ ọrụ. Enweghị njide njikwa na-egosi na ule ahụ adịghị mma.
AKWPLKWỌ NA EGO
Nwalee ngwaọrụ iche iche foro poicched na a desiccant
• Plastic tụpu.
• Ihe Nlereanya
• ngwugwu Fanye
Njikwa dị mma na nke na-adịghị mma (dị ka ihe dị iche)
Nchekwa & kwụsie ike
A ga-echekwa ihe nnwale ahụ na 2-30 ℃ na obere akpa akara na n'okpuru ọnọdụ akọrọ.
1) A ghaghị ikwenye nsonaazụ ọma niile site na usoro ọzọ.
2) Na-emeso ụdị niile dị ka ọnwere ike ịrịa ọrịa. Yiri uwe aka na uwe nchebe mgbe ị na-ejikwa ụdị.
3) Ngwaọrụ ejiri maka nnwale kwesiri iwepu onwe ya tupu ekpofu ya.
4) Ejila ihe eji eme ihe gafee ụbọchị njedebe ha.
5) Agbanwela ihe ndi ozo site na otutu nza.
NKỌTA Mkpokọta na nchekwa
1) Na-anakọta ọbara dum / ọbara / Plasma na-eso usoro nyocha ụlọ nyocha oge niile.
2) Nchekwa: Ọbara niile enweghị ike ịjụ oyi. Ekwesịrị itinye friji ma ọ bụrụ na ejighị ya n'otu ụbọchị nchịkọta. Ekwesiri ime ka ihe nkpuru kpuchie oyi ma oburu na ejighi ya n'ime ubochi ato 3 Zere kefriza na igba mmiri mkpụrụ osisi ahụ karịa oge 2-3 tupu i jiri ya. Enwere ike ịgbakwunye 0.1% nke Sodium Azide na mpempe akwụkwọ dị ka ihe nchekwa na-enweghị emetụta nsonaazụ nnwale ahụ.
1) N'iji ihe eji emechi plastik maka ihe nlele, nye 1 dobe (10μl) nke Blood / Serum / Plasma zuru oke nke ihe nlele nke kaadi ule.
2) Tinye 2 tụlee nke Sample Diluent na ihe nlele nke ọma, ozugbo agbakwunyere ihe atụ ahụ, site na mpempe mmiri na-egbu mmiri (ma ọ bụ ọdịnaya niile site na otu nnwale ampule).
3) pretkọwa nsonaazụ ule na minit 15.
1) Itinye ihe zuru ezu nke ihe atụ diluent dị mkpa maka ezigbo ule nyocha. Ọ bụrụ na ahụghị mpụga (wetting of membrane) na windo ule ahụ mgbe otu nkeji gachara, tinye otu ntụ ọzọ nke diluent na nlele ahụ nke ọma.
2) Nsonaazụ dị mma nwere ike ịpụta ozugbo otu nkeji maka ihe atụ nwere nnukwu ọgwụ nje HCV.
3) Notkọwapụtaghị nsonaazụ mgbe nkeji iri abụọ gachara
GW R NTỌNW T ỌLỌ
1) Positive: Ma otu ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara na-acha ọcha na-apụta na akpụkpọ ahụ. Alalata mgbochi antibody, ike na-adịghị ike ule gbalaga.
2) Na-adịghị mma: Naanị ihe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-egosi na akpụkpọ ahụ. Enweghị otu ule nyocha na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma.
3) Nsonaazụ na ezighi ezi: A ga-enwerịrị otu ihe nchịkwa na-acha uhie uhie na mpaghara njikwa, n'agbanyeghị nsonaazụ ule ahụ. Ọ bụrụ na ahụghị otu njikwa, a na-ahụta ule ahụ na ọ nweghị isi. Tinyegharịa ule ahụ site na iji ngwa nyocha ọhụụ.
Rịba ama: Ọ bụ ihe nkịtị ịnwe mmachi njikwa dị ntakịrị nke nwere ihe atụ dị ike siri ike, ọ bụrụhaala na ọ pụtara nke ọma.
1) Naanị doro anya, nke ọhụrụ, n'efu na-agba ọbara dum / ọbara / Plasma nwere ike iji na ule a.
2) Ihe omuma ohuru di nma ma enwere ike iji ihe omuma. Ọ bụrụ na ihe nlele akpọnwụwo, ekwesịrị ịhapụ ya ka ọ gbazee n'ọnọdụ kwụ ọtọ wee lelee ya maka mmiri mmiri. Dum Blood enweghị ike oyi kpọnwụrụ.
3) Emela iwe na nlele. Fanye pipetị dị n'okpuru elu nke nlele iji nakọta Specimen.
Nke gara aga: HCV Rapid Test Cassette / warara / kit (WB / S / P)
Osote: COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Rapid Test Cassette